डा. गाेबिन्द के.शी ले रास्ट्रका लागी आफुलाई मृत्युकाे मुखमा हाल्न खाेजेका हुन भने तपाई हाम्राे साथ जरुरी छ। « Light Nepal
Published On : 23 January, 2019 6:05 pm
सहजता खोज्दै मान्छेले जीवनको अन्तिम सास फेर्छ। यो यथार्थ तितोसत्य हो। पिडा मान्छेले जन्म संगै लिएर आएको हुन्छ। अझ यसो भनौ पिडा मान्छेले आर्जेको पहिलो सम्पत्ति हो । निष्ठा, त्याग, माया, मोह, आकर्षण, सेवा,रिस,क्रोध , लोभ र नातागोता यी सबै पछि समयले दिएका उपहार हुन । महात्मा गान्धी ,गौतम बुद्ध , रत्नाकर,कालिदास त्यागी र सत्यग्रही थिए । समय कालखण्डमा सबैको चर्चा र बिवाद भएपनि जसलाई आज लोकले मानेको छ । निष्ठाको बाटो हिड्ने मान्छे लोभ,लालच,कामुकता र क्रोध बाट मुक्त हुनुपर्छ । अन्यथा पतन निश्चित छ। डाक्टर केसी हालसम्म राष्ट्रको पक्षमा उभिएको हुन भन्ने दुइचार जना राष्टघातिहरु बाहेक अरु सबैको एकमत छ। तर डाक्टरसाप क्रोधबाट भने मुक्त छैनन।यो मेरो मूल्याकंन हो । अरु मुल्यांकन समय र समाजलाई गर्ने जिम्मा दिन्छु। सामुहिक समस्या निजी समस्या हैन,छैन र हुदैन । त्यसका लागी हालसालै गरेको पत्रकार समेलनमा डाक्टरसाप जङ्गिनु भन्दा बिबेकले काम गरेको भए सम्भवत अनशन विरुद्ध अनशन हुने थिएन कि?
पहिलो पटक र १६औं पटकको अनशनमा अन्तर नभएको हैन । अन्तरको कारक डाक्टरसाप स्वयम हुन। पहिलो पटक चिकित्सक शिक्षा सुधारकको एकसुत्री माग मात्रै थियो । जसलाई सबैले जयजयकार गरेका थिए,हुन र छन । यो नैतिकवान ,निष्ठावान र इमान्दार राष्ट्रसेवकको कर्तव्य भित्र पर्थ्याे र रहिरहने छ। तर बिच- बिचमा समयसापेक्ष राजनीतिक मुद्दामा हातहाल्नु,सत्याग्रह भनेर बसिएका अनशन बिना सहमति ताेडनु डाक्टरसापको कमजोरी हो,थियो र छ । यसको लक्ष्य के थियो र उपलब्धि के भयो?त्यसो गर्नुहुन्थ्याे कि हुदैन थियाे?समिक्षा डाक्टर सापले गरुन् । तर मुल बिषय के हो भने सारा देश सुधार्ने ठेक्का डाक्टर सापको काधमा भने कदापि छैन। १६औं अनशनमा समेटिएका २वटा माग सहि भएपनी डाक्टरसापले ती बिषय नजोडेको भए उचित हुने थियो।जसले गर्दा आज अनशन विरुद्ध अनशन भएको हो कि भन्ने मेरो बुझाई छ । यो दुखद अवस्था मात्रै नभै डरलाग्दो अवस्था पनि हो। डाक्टरसापले १६औं पटक सम्म आउदा गरेको त्यागमा स्वार्थ छ भन्ने संकेत गर्नु पनि हो । यदि यसो हुन गयो भने बबुरा जनता साढेको जुधाइ मा बाछाको मिचाई हुने निश्चित छ। जसलाई गलत साबित गर्न डाक्टरसापको ध्यान जाओस।
खाई,पाई र लाई आएको ऐस ,आराम, हाँसी, खुसीको जिन्दगी स्वास्थ क्षेत्रको सुधारका लागि मृत्युको मुखमा हाल्न डाक्टर पुगेकै हुन भने यसमा मेरो र तपाईको सतप्रतिशत सहमति र साथ हुन जरुरी छ। यदि यसो नभै राजनिती मुद्दा उठाई विपक्षीलाई बिरोधको मसला बनाउन खोजेका हुन भने हामी गोठालेहरुले गोठालो जिन्दगी ब्यतित गर्नु मै मज्जा थियो र छ।अर्को कुरा सहमति गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको नियत गलत छ र थियो। यदि डाक्टरसापले उठाउनु भएका बिषयमा सरकार स्वयंमले ध्यानाकर्षण गर्ने हो भने डाक्टरसापहरु बिरामी उपचारमा मात्रै लाग्ने छ्न ,अनशन बस्ने छैनन। अन्यथा यी र यस्ता बिषय डाक्टर केसी र केसी जस्ता मान्छे कालजयी भएर जन्मिई रहने छ्न । जय राष्ट्र,जय राष्ट्रियता लेखक-भोजराज घोडासैनी,सुर्खेत,हाल:दक्षिण कोरिया
प्रोग्रामिङ सिकाउने तीन एप
यो प्रविधिको युग हो। अहिले मोबाइल र कम्प्युटर सबैको हातहातमा छ। यी सामग्री आजको आवश्यकता